Famerenana ny boky tsy misy fikomiana
Helgoland nataon'i Carlo Rovelli
Ny fanambin'ny siansa dia tsy ny fitadiavana na fanolorana vahaolana ho an'ny zava-drehetra. Mikasika ny fanomezana fahalalana ho an'izao tontolo izao ihany koa ny olana. Ny famoahana dia ilaina satria sarotra izany rehefa ampidirina amin'ny halalin'ny taranja tsirairay ny hevitra. Fa araka ny voalazan'ilay olon-kendry dia olombelona isika fa tsy misy ...
The Runaway Kind nataon'i Anthony Brandt
Mibanjina ny zava-miafina lehibe momba ny fivoaran'ny olombelona isika, ilay zava-mahatalanjona izay zava-misy tsy mitovy. Tsy miresaka momba ny faharanitan-tsaina loatra izahay fa ny famoronana. Miaraka amin'ny faharanitan-tsaina, ny proto-lehilahy dia afaka mahatakatra ny atao hoe afo avy amin'ny vokatry ny fanatonana azy. Noho ny famoronana...
Sacramento, nataon'i Antonio Soler
Ny mahasarika ny bao dia dictation ny fizika. Avy eo ny renin'ny fifanoherana rehetra. Ny toerana ambony indrindra amin'ny olombelona dia mifamatotra amin'ny fahatsapana tsy azo sakanana amin'ny andriamby na inertia. Ny tsara sy ny ratsy dia mampiseho ny katalaogin'izy ireo momba ny foto-kevitra sy ny fakam-panahy ary ny zavatra rehetra ...
Ny lisitry ny zavatra very sasany, Judith Schalansky
Tsy misy paradisa mihoatra noho ny very, araka ny nolazain’i John Milton. Na zavatra sarobidy kokoa noho ireo izay tsy anananao intsony, ary tsy azonao jerena. Ny tena zava-mahatalanjona eo amin'izao tontolo izao amin'izay fotoana izay dia maro kokoa ireo izay ho very na rava noho ireo izay noforonina ho toy izany ankehitriny, manampy ...
The Art of War Between Companies, nataon'i David Brown
Nanoratra ny bokiny "The Art of War" i Sun Tzu tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK. Ady maro taty aoriana, ary nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'izao, ny fifandirana vaovao izay hampiharana ny kanto tsara na ratsy dia iadian-kevitra eo amin'ny firenena maro na ny orinasam-panjakana. Miroso amin’ny kanto amin’ny...
Ny Jiro lehibe, nataon'i Maria Konnikova
Mpanoratra talohan'ny naha-mpilalao poker azy dia tonga tamin'ny lalao kilalao karatra i María Konnikova tamin'ny filan'ny mpitantara tsirairay izay te-hanatona seho tantaraina vaovao mba hampilentika ny sahan-kevitra. Manampy ny dokotera amin'ny psikolojia izahay ary mahita kinova sarotra amin'ny Pelayo ...
pejy1 pejy2 ... pejy17 manaraka →